China Imishini Ukukhiqiza futhi Factory | UKUPHENDULA
Ikhwalithi ephezulu Extreme Pressu ...
I-Petroking High Quality High ...
I-PETROKING Best Price Lithiu ...
Petroking Anti-Gqoka umfutholuketshezi ...
Petroking Udizili Engine Amafutha ...
Ukuthwebula Isondo Elisindayo Elisindayo ...
Petroking Lubricant Oils Ge ...
Petroking umfutholuketshezi Transmi ...
Umshini wethu wokugcwalisa usetshenziswe kabanzi emabhizinisini okupakisha namancane okupakisha embonini yegrisi kanye negrisi eChina.Lolu chungechunge lwemikhiqizo lungabonakala kusigubhu esikhulu (180L) kumthamo ngamunye webhakede eliphakathi / elincane, isikhwama, ikani, ibhodlela nezinye iziqukathi zokulinganisa okuzenzakalelayo, ukugcwalisa.Lolu chungechunge lwemikhiqizo lunekhanda elilodwa, ikhanda elimbili, namanye amamodeli, angahlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zabasebenzisi bazo zonke izinhlobo zezidingo zokupakisha.
Ububanzi obuningi obu-1: 0.2-2L 2-18L 2 ukunemba kokugcwalisa: ± 0.5%
3. Filling capacity: &gt;
12L / iminithi (1 L umgqomo wohlobo oluhlukanisiwe)
4.Umfutho womoya: 0.4Mpa
5. Ukusetshenziswa kwegesi: 0.6m3 / min
6 Amandla imodeli ehambisa motor: Y160L-8 / 7.5KW
7. Ubukhulu; 2600 * 1800 * 2550 mm (imikhawulo ephindwe kabili)
Isisindo se-Net: 1200-1800 kg
Lo mshini ungumshini we-volumetric metering kanye nomshini wokupakisha, owakhiwa izingxenye ezimbili: izinto zokudlulisa nokugcwalisa. Lezi zingxenye ezimbili zixhunywe ngokuphelele ngamapayipi.
Lo mshini uyimodeli enamakhanda aphindwe kabili, ungasetshenziselwa isisekelo se-calcium, i-base grease nokunamathisela nokunye ukugcwaliswa nokugcwaliswa kwezinto ezinamanzi amancane.
Ingxenye ehambisa impahla engu-1:
Ingxenye yakhiwe ngohlaka, iqembu lesilinda, ipulatifomu yokuphakamisa kanye ne-auger ephakamisa.
Ngenxa yoketshezi olubi lwe-grease nezinye izinto ezinjenge-liquid, insimbi yokudlulisa i-auger iyamukelwa.
Lapho usebenza, phusha umgqomo ogcwele izinto ezingama-180 wamalitha kupulatifomu yokuphakamisa. Amasilinda amabili aqhuba itafula elisebenzayo ukuze likhuphuke. Ngasikhathi sinye, i-auger iyajikeleza ukuhambisa izinto emgqonyeni ibheke phezulu phezulu bese izithumela zisuka ethekwini eliphezulu ziye engxenyeni yokugcwalisa.
2 Ukugcwalisa ingxenye:
Ingxenye yokugcwalisa yakhiwa ngohlaka, ikhanda lokugcwalisa lokulinganisa kanye nesilawuli sokuqala.
Uhlelo lokugcwalisa amamitha lilawulwa yi-valve yonyawo noma i-valve yokudonsa esetshenziswa ngesandla. Inhloko yokugcwalisa amamitha yakhiwa nge-volumetric metering cylinder ne-valve yokujikeleza.
Ingxenye engezansi ye-piston yesilinda le-metering ifakwe ukudayela ukulungisa usayizi wevolumu, ongaguqula inani lokugcwalisa ngokwesidingo.
Umthamo we-dextral wokudayela uyancipha futhi ivolumu yesokunxele iyakhuphuka.
Ekuqaleni kokugcwaliswa, ibhakede (isikhwama) liqondaniswe nechweba lokukhipha, ukuze lisondele ezansi kwebhakede (isikhwama). Ngesikhathi sokugcwaliswa, okokusebenza kuzokhipha umoya ebhakedeni (esikhwameni) kusuka kuzungeze umbhobho wokugcwalisa ngokulinganisa ukugeleza ezansi. Ngasikhathi sinye, okokusebenza (isikhwama) kuzokwehlela ekugcwaliseni ngokuphelele.
3 Uhlelo lukagesi nesimiso sokusebenza somoya:
Ukujikeleza kwe-auger kwalo mshini kuqhutshwa yimoto. Kukhona ikhabethe lokulawula kagesi ngemuva kwe-fuselage kanye nokudluliswa okushisayo kokuvikelwa ngokweqile kwemoto.
Inkinobho yokushintsha imoto ibekwe kuphaneli langaphambili lomshini wokugcwalisa.
Ngaphezu kwezinye izingxenye ezingenhla kukhona ukulawula kwe-pneumatic, ingxenye ehambisa impahla yekhabethe lokulawula umoya phambi kwe-fuselage, ingxenye yokugcwalisa yohlelo lokulawula umoya ifakwe kufreyimu yomshini wokugcwalisa.
Ingxenye ehambisa impahla ingabona isenzo sokuphakamisa umgqomo, ukumisa umgqomo nokuwisa umgqomo.
Ukudlulisa nokugcwalisa kulawulwa ngokwehlukana, futhi imiphongolo ephezulu nengaphansi (izikhwama) isebenza ngesandla.
Umoya ocindezelweyo osuka esiteshini esihambisa ugesi noma i-air compressor ungena emshinini ngemuva kokuhlungwa.
Umoya ocindezelweyo ungena ku-cylinder ne-logic element ngokusebenzisa i-valve enqunyiwe, isihlukanisi sesilinda, ingcindezi elawula i-valve, idivaysi yenkungu kawoyela, ukubuyisela emuva i-valve.
Inqubo yokusebenza yomoya: ibhakede elingenalutho (isikhwama) liqondanisa umbhobho wokugcwalisa, i-valve yonyawo iqalisiwe, ikhanda lokugcwalisa liqala ukusebenza, ibhakede (isikhwama) lehla ngokuvumelanayo, ukugcwaliswa sekuphelile, ibhakede (isikhwama) liwela isikhundla, isilinganiso sibuyiselwa esimweni sokuqala futhi okokusebenza kuhogelwe.
Susa ngesandla ibhakede (isikhwama) bese ufaka ibhakede elingenhla (isikhwama) bese uqala i-valve yonyawo ngomjikelezo olandelayo wokusebenza.
Langaphambilini I-8 Year Exporter Hammer Grease - Petroking Ep2 Ep3 Lithium Grease 17kg Pail - PETROKING
Olandelayo: Petroking Yellow Grease Multipurpose Lithium Grease 1kg Isikhwama
Umshini Wokugcwalisa Umgqomo